6-da Astaamood ee ugu muhiimsan Calaamadaha Ganacsiga | Martech Zone
Isniin, Maarso 15, 2021 Isniin, Maarso 15, 2021 Alicia Rother
Mar, markii laga hadlayo astaamaha, naqshadeeyaha astaamaha halyeeyga ah ee IBM, UPS, Enron, Morningstar, Inc., Westinghouse, ABC, iyo NeXT wuxuu yiri sidan:
Astaan ​​ma iibiso, waa la aqoonsadaa.
Si aad u noqotid aqoonsiga ugu ballaadhan uguna wakiilka ah astaantaada, astaamo kasta oo qaabeynta astaamahaaga ah waa inay halkaas u joogtaa sabab. Dhinac walba waa inuu wax ka sheegaa noocaaga. Qaabka aad doorato, midabada aad doorato, iyo noocyada aad doorato, waa inay qayb ka ahaadaan sheeko xariirsan oo kooban.
Si taas loo gaaro, waxaan aqoonsannay lix astaamood oo ka dhigaya naqshadeynta astaanta astaan, xusuus, iyo xiriir la leh astaantaada.
1. Fudud & Kala Duwan
Fududaanku waa furaha. Sida maskaxda bini aadamku u adag tahay, waxay doorbideysaa fudeyd. Qaababka iyo ku celcelintu waa waxyaalahooda. Maaddaama ay ku shaqeyneyso macluumaadka xawaare deg deg ah, qaabeynta fudud kama dhigeyso maskaxda inay si adag u shaqeyso. Iyo sababta oo ah waxay aad u jeceshahay naqshadda fudud, maskaxdu si fiican ayey u xusuusataa, si fudud ayeyna u maareyn kartaa, oo si qumman ayey u fahmi kartaa.
Abuuritaanka naqshadeynta astaanta fudud way ka adag tahay abuurista mid adag. Fikirkaagu wuxuu u baahan yahay inuu ahaado mid nadiif ah oo soo dhaweyn leh si uu u yimaado fikradaha fudud. Ka fikir Microsoft, Nike, iyo Target, iwm. Fikradaha fudud, faan la'aan, iyo matalaad qumman oo fekerka ka dambeeya astaanta.
Maxaa ka dhigaya astaan ​​wax ku ool u leh gudbinta astaanta maahan waxyaabo badan oo naqshadaysan oo lagu dhisay. Waa maqnaanshihiisa, laakiin waxay awood u leedahay inay tiraahdo wax badan taas oo ka dhigaysa astaan ​​wax ku ool ah.
Zaheer Dodhia, Aasaasihii LogoDesign.net
Intaa waxaa sii dheer, fikraddaada fudud waa inay noqotaa mid gaar ah. Waa inay ka tirsanaataa astaantaas iyo astaantaas oo keliya. Markay dadku fiiriyaan, waa inaysan ka fikirin wax kale oo aan ahayn astaantaada.
Si loo abuuro naqshad noocan oo kale ah, cilmi-baaristaadu waxay u baahan tahay inay noqoto mid dhammaystiran. Baro waxa tartamayaashu sameeyeen oo iska ilaali inaad ku celceliso naqshadooda. Sidoo kale, wax ka baro inta aad kari karto aad summad. Fahmaan waxa ay ku saabsan tahay ka dibna u keen shiraacda.
Kheyraadka Naqshadeynta Calaamadaha
2. Tilmaamo Ganacsi oo Ku Haboon
Astaamo kasta, midab, ama xuruuf kasta oo aad doorato markaad sameysid astaan, waxay gudbineysaa farriin. Qaabka saddexagalka wuxuu gudbinayaa hoggaaminta iyo xukunka; goos gooska waqtiga iyo gebi ahaanba. Gudaha midabo, liinta waa mid faraxsan oo firfircoon halka buluugga uu dejinayo. Oo macnahan ayaa is beddelaya markaad beddesho hooska iyo hue. Marka, xulashada astaamaha lagu daro astaantaada waxay u baahan tahay inay noqoto mid aad u fekeraya oo miyir qab ah.
Aynu nidhaahno, waxaad dooneysaa inaad abuurto astaan ​​shirkadeed oo xayeysiin ah waxaadna rabtaa inaad gudbiso hal-abuurnimada iyo hoggaaminta laakiin sidoo kale shakhsiyad sumcad leh Waxaad go'aansan kartaa inaad u xilsaarto astaamo kala duwan si aad u daryeesho tilmaamo ganacsi oo kala duwan. Tusaale ahaan, qaabkaaga sumadda xayeysiinta ah ayaa u gudbin kara hoggaaminta halka xulashada xarfaha ay noqon karto hal-abuurnimo. Qaybta xiisaha leh waxaa lagu soo diri karaa xulashada midabkaaga, iyo wixii la mid ah.
Asal ahaan, waxaad u baahan tahay inaad ka feejignaato sababta aad u sameyneyso xulashada naqshadeynta ee aad sameyneyso oo aad hubiso in mid kastaaba uu sheegayo dhinac u gaar ah astaanta.
3. La Xiriira Warshadaha Iyo Nooca
Maxay noqon kartaa a naqshadeynta astaanta wanaagsan hal warshad waxay u noqon kartaa masiibo guud mid kale. Markaad abuureysid istiraatiijiyaddaada naqshadeynta, ka feker warshadaha sumaddaadu iska leedahay. Kadib dooro nashqaddaada daruuriga ah ee ku habboon warshadahaas.
Tusaale ahaan, haddii aad abuureyso astaan ​​injineernimo, isticmaal astaamo iyo astaamo farsamo ahaan u shaqeeya. Qaab qoraal toosan oo dareemaya culeys saarid, iyo xulashooyin midab leh oo dhexdhexaad ah ama gudbinaya dareen qiiro leh. Fikraddaada naqshadeynta sidoo kale waa inay ahaato mid ku habboon shakhsiyadda astaanta ah ee aad u socoto. Xulashadaada naqshadeynta nooc fudud iyo summad carqalad leh ayaa si aad ah uga duwanaan doonta.
4. Scalable for Branding
Naqshadeynta astaanta ayaa lagu soo bandhigayaa meherado badan oo suuq geyn ah ugu badnaan soo-gaadhista iyo aragtida wax ku oolka ah. Laga soo bilaabo meelaha yar yar sida sahaminta astaanta aaladda illaa shiraacyada waaweyn sida boorarka magaalada, astaantaadu waxay noqon kartaa meel kasta. Sidaa darteed, abuuro naqshad fudud oo ku filan oo ku filan oo aan dadku dhib ku qabin in la ogaado ama la fahmo iyada oo aan loo eegin cabirkeeda ama halka lagu soo bandhigay.
Si kale haddii loo dhigo, waa inay noqotaa mid la qiyaasi karo oo wax laga qaban karo. Haddii aad u kireysatay naqshadeeye garaaf ah astaanta astaantaada, weydii inay kuu soo diraan feylasha asalka ah ee asalka ah si aad u hesho xorriyad dhammaystiran oo kor loogu qaado astaantaada kor ama hoos. Haddii aad ka helayso astaanta adeegga samaynta calaamadda internetka, hubi inaad doorato xirmo naqshad leh oo ku siinaysa feylka fekerka astaanta. Qaabka fektoorku wuxuu ilaaliyaa tayada qaabeynta marka aad miisaanka saareyso astaanta.
5. Noocyo Suuqgeyn ah
Astaanta sumadda wax ku oolka ah waxay u baahan tahay kala duwanaansho. Haddii aad kala soocdo astaamihiisa ama aad bedesho midabkiisa ama qaabeynta, waa inay weli sii haysataa qaabkeeda gaarka ah. Tixgeli calaamadda Apple markale. Si loogu dabaaldego Bisha Kibirka, astaantu waxay daadisaa codadkeedii caadiga ahaa ee dhulka waxayna qaadataa midabada dhalaalaya ee qaansoroobaad. Laakiin qaabka astaanta tufaaxu wali way kala duwan tahay - markaa waan ognahay nooca ay tahay.
Markaad naqshadeynayso astaanta astaanta, ka feker haddii astaamaha kala duwan ay u shaqeyn karaan si madax bannaan ama marka ay meelaha beddelayaan. Kala duwanaanshaha calaamaduhu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u dabaaldegto munaasabadaha muhiimka ah, tilmaamayso taariikh weyn, ama ka mid noqoshada dhaqdhaqaaq ka sii ballaadhan inta aad ballaadhinayso astaantaada oo aanad waligaa sii deynin aqoonsigaaga astaanta ah.
Naqshad sameynta aqoonsi xirfad leh oo farsameysan waa inay ku jirtaa noocyo kala duwan oo astaan ​​ah sida naqshad astaan ​​keliya ah, ikhtiyaar midab madow iyo caddaan ah, ikhtiyaar midab keliya ah, xulasho magac keliya ah, iwm.
6. Xusuus Reeb Si Fiican
Marka nashqadeynta astaantu ay fududahay oo kala duwan tahay, waxay kordhisaa dib u soo celinta. Fududeyntu waxay sahlaysaa in la fahmo halka muuqaalka kaladuwan uu na siinayo wax u gaar ah inaan diiradda saarno. Markay isu yimaadaan, waxaan ku dhammeynaa naqshad gaar ah oo si fudud loo xusuusto. Dhammaan nashqadaha caanka ah ee caanka ah ee adduunka ayaa leh tayadaas.
Abuuritaanka naqshad lama ilaawaan ah ma sahlana, laakiin waa muhiim. Uma baahnid in astaantaada astaanta ahi ay isku weydo badweynta nashqadaha aqoonsiga. Iyada oo loo marayo dheelitirka miyir-qabka ee midabada, qaababka, xarfaha, iyo qaababka, u samee muuqaal muuqaal ah oo ku sii jiraya maskaxda dadka muddo dheer ka dib markay arkeen astaanta. Waa inay aragti ku yeelataa yar yar oo ilbiriqsi ah.
Maxaad Ka Fekirtaa?
Aniga ahaan, waa 6da astaamood ee muhiimka ah waa inay kujiraan naqshadeynta astaanta si ay waxtar u yeelato. Maxaa kale oo aad ku dari lahayd? Waqti la’aan waa muuqaal kale oo weyn oo astaantaadu ku habboon tahay sannadaha soo socda. Oo markii aad ku dadaashay inaad fuliso 6-da amar ee ugu sarreeya naqshadeynta astaanta wanaagsan, fursadaha ayaa ah inaad horeyba u abuurtay sawir aan waqti lahayn.
Marka, ku qayli faallooyinka ku saabsan muuqaalka aad u maleyneyso inuu yahay kan ugu muhiimsan oo horey u sii wata aqoonsiga astaanta.
Tags: astaanta tufaaxaastaanta hanka tufaaxsumadda ganacsiganaqshadee astaanlogoastaamaha astaantanaqshada astaantacalaamadahaMicrosoftMicrosoft logoNikebartilmaameed
Alicia Rother waa istiraatiijiyad iskaa wax u qabso oo madaxbanaan oo la shaqaysa ganacsiyada yaryar iyo bilowgooda si kor loogu qaado sumadooda iyadoo loo marayo naqshadaynta nuxurka hal abuurka iyo qorista. Aaggeeda qibrada leh waxaa ka mid ah suuq geynta dijitaalka, sawirada, calaamadeynta, iyo qaabeynta qaabeynta.
Xiriirka Ka Dhexeeya Shaqsiyaadka, Safarada Iibsadaha, Iyo Meelaha Iibka